Peixin akapindawo muNye Yekunze Tech Asia 2019 muDelhi, India
na admin on 20-03-23
Kubva paJun 6th kusvika paJun 8th, iyo YeNau Woven Tech Asia Fair yakaitwa muDelhi. Semumwe wevanyanzvi vevatengesi, PEIXIN Boka rakava rakakurumbira. Isu takafara kwazvo kuti takawana goho rakanaka. Vazhinji uye vazhinji vanhu vanoziva nezvedu uye vanoratidza kufarira kukuru mumashini edu. Uye yako ...
Peixin akapindawo muCHINNOTEX 2018 muMumbai, India
Kubva paJun 28th kusvika paJun 29th, Techno Tex India Fair yakaitwa muMumbai. Semumwe wevanyanzvi vevatengesi, PEIXIN Boka rakava rakakurumbira. Isu takafara kwazvo kuti takawana goho rakanaka. Vazhinji uye vazhinji vanhu vanoziva nezvedu uye vanoratidza kufarira kukuru mumashini edu. Uye mutsigiri wako ...
ANDTEX 2019 ndiyo chiitiko apo nonwovens uye enjiniya zvigadzirwa vanogadzira, vanotsvaga, vashandisi, uye vatungamiriri vemaindasitiri kubva kupasi rose vanoungana kuti vaongorore hupfumi hwemikana mitsva yebhizinesi yevasinavens uye zvinogadzirwa zvoutsanana muSoutheast Asia. Southeast Asia inoumbwa ne1 ...
IDEA ® 2019, chiitiko chepamberi pasiresevens uye enjiniya nyanzvi, vakagamuchira vatori vechikamu, mazana matanhatu nemakumi mashanu vachiratidzira makambani kubva munyika makumi manomwe neshanu neshanu dzakapfekedzwa machira vanoteedzera keteni kuita bhizimusi svondo rapfuura muMiami Beach, FL. The 2 ...
Peixin akapindawo muNON WOVEN EXPO BANGLADESH
Kubva paJun 27th kusvika paJun 29th, iyo NON WOVEN EXPO Fair yakaitirwa muDhaka. Semumwe wevanyanzvi vevatengesi, PEIXIN Boka rakava rakakurumbira. Isu takafara kwazvo kuti takawana goho rakanaka. Vazhinji uye vazhinji vanhu vanoziva nezvedu uye vanoratidza kufarira kukuru mumashini edu. Uye kutsigira kwako ...
na admin pa 19-11-28
Kubva Jan 17th kusvika Jan 19, Techno Tex India Fair yakaitirwa muNew Delhi. Semumwe wevanyanzvi vevatengesi, PEIXIN Boka rakava rakakurumbira. Isu takafara kwazvo kuti takawana goho rakanaka. Vazhinji uye vazhinji vanhu vanoziva nezvedu uye vanoratidza kufarira kukuru mumashini edu. Uye wako supp ...
Iyo 113th Chinese Inoda uye Export Fair
Kutenda kune vese vatengi vanotora nguva yavo uye kushanyira imba yedu, iko kukudzwa kwedu kukuru kusangana nevose. Seimwe yechimwe chiitiko chisingakanganwike, takapinda iyo 113th China Import uye Export Trade Fair yakaitwa kubva musi wa15 kusvika 19 Kubvumbi - 2013, mukurumbira waCanton Fair une ...
The International Injiniya Fabric Musangano & Expo MuUSA
Munguva yeApril 23 kusvika Kubvumbi 25, Isu takapinda International Internationaleredered Fabric Musangano & Expo MuMiami, USA.Thanks nekuda kwechiitiko ichi, isu tamboongorora musika wedu muAmerican Market.More uye vatengi veAmerica vazhinji vaziva mhando yeFONIXIN. Isu tinodada kuzivisa kutengeserana neRP ...
Iyo Istanbul Technical Textiles & Nonwoven Trade Fair
Istanbul Technical Textiles & Nonwoven Trade Fairfrom 29th, Chivabvu kusvika 1, Gunyana - 2013 yakabudirira kubudirira muIstanbul, Turkey. Isu takaonga zvikuru nerutsigiro kubva kune vatengi vedu vanokoshesa avo vakashanyira imba yedu yekuratidzira. Uye mhando yavo inotsigira yakaita kuti ratidziro yedu iwane g ...
Wet Wipes Machine , Mini Pad Production Line , Panty Liner Production Line , Lady Pad Machine , Dhonza Up Machine , Mazuva ese Hutsanana Machine ,